Bubble Shooter 🥇 Pinda uye unakirwe kubva emulator.online
Bubble Shooter mutambo weApple neIOS unoda kufunga nekukurumidza uye kunyatso tarisa. Mutambo une chitarisiko chine mavara kwazvo uye mutambo wakapusa kwazvo. Tarisa matipi edu uye dzidza kutamba uyu muropa mutambo.
Maitiro ekutamba Bubble Shooter 🙂
Kuti utambe Bubble Shooter pamhepo mahara, unofanira kungoita tevera iyi rairo nhanho nhanho:
1 danho. Vhura browser yako yaunofarira uye enda kune webhusaiti yemutambo Emulator.online
2 danho. Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watove kuratidzwa pachiratidziri. Unofanira chete rova kutamba uye iwe unogona kutanga kusarudza iyo gadziriso yaunoda zvakanyanya. Kana uchinge wakunda mutambo unogona kukwira kumusoro. Iko kune huwandu hwenzvimbo shanu.
4 nhanho. Tora kubvisa iwo ese mabhuru mumutambo.
Chii chinonzi Bubble Shooter? 🤓
Bubble Shooter imwe yeiyo mitambo yekudyidzana inonyanya kuzivikanwa bubble shooter inozivikanwa, nekuda kwekureruka kwekutamba uye kuve inonzwisisika. Unogona kutaura izvozvo Icho musanganiswa we mimwe mitambo miviri ine mukurumbira senge "Tetris" uye iyo "batanidza ina", izvo zvinoita Bubble Shooter mutambo unonakidza kwazvo.
Chinangwa Bubble Shooter iri nyore kwazvo: unganidza akawanda mapoinzi sezvinobvira kuparadza matema ane mavara. Kuti uparadze mabhuru, zvinodikanwa kuti ubatanidze angangoita matatu mabhuru eruvara rwakafanana.
Nhoroondo ye dhudhumira Shooter 🙂
Iyo inonakidza uye inozivikanwa dambanemazwi mutambo yatakatamba tese pane imwe nguva. Nekudaro, vazhinji havazive kuti midzi yayo iri mumutambo wakabuda mu maJapan masiketi muma80s, uye pakutanga yainzi Bubble Bobble. Yakanga isati yasvika makore makumi mapfumbamwe kuti yakasvika kuMadokero, asi nedzimwe shanduko kubva kumutambo wekutanga.
Bubble bobble Yakaburitswa muna 1986 pamatanho eJapan. Mariri, madhiragi maviri madiki, Bub naBob, aive akatarisana ne ushingi, ine zvimwe zvinhu zve Puzzles uye kurwa nevavengi thematic padanho rega rega.
Iine graphic zvinoenderana nenguva, uye uchiyeuchidza nezve maJapan macartoon, iyo juego yakamira kunze pamusika nekuve kunakidzwa uye kupindwa muropa, Chinhu chakakosha kune arcade. Uyezve, yaive imwe yemitambo yekutanga kushandisa pfungwa ye "akawanda magumo", chimwe chinhu chingazove chinozivikanwa mune mimwe mitambo yemazuva ano Zvichienderana nekuita kwemutambi, kupera kwekunakidzwa kunogona kuve kwakasiyana
Sezvo pakutanga, mutambo waingobudirira muJapan, mu 1994, kambani inogadzira Taito yakafunga kununura mavara ayo ane mukurumbira uye kuvasunungura mune imwe zita. Ino nguva yakadanwa Dambanemazwi Bubble, uye neakanatswa mapikicha makanika Mutambo wacho waive wekurohwa pakarepo
Neshanduro iyi nyowani, vakakwanisa kuita chimwe chinhu chakasiyana nechavaive vajaira. Vanoisa parutivi mapuratifomu ane vavengi kuti tiite kuti tipinde mu dambanemazwi mutambo wezvipenga zvakaenzana zvemuvara mumwe chete kuti uwane zvibodzwa. Asi, kusiyana naTetris, imwe hit yenguva, zvidimbu zvakabva pasi kumusoro, Yakaburitswa naBub naBob.
Kana iwe ukazadza iyo skrini nezvidimbu iwe unowana iyo Game Over. Pakati pezvidimbu zvakakandirwa, zvaive mabubble emvura, vaive mapenzi emutambo wekare wekutaridzwa.
Vatambi vaviri ivo vaigona kutora chikamu pamwe uye kunongedza mapoinzi pamwechete. Pfungwa iyi yaive yekuzivisa mavara emakore gumi apfuura kuchizvarwa chitsva chevatambi, asi panguva ino nechiso chitsva. Uye zvakashanda.
Mhando dzeBubble Shooter ⭐
Kune zvinopfuura makumi matatu shanduro dzemutambo uyu wakakurumbira, asi iwo akakodzera kwazvo akagadzirirwa vhidhiyo ekunyaradza.
Ultra Bust-A-Fambisa uye dambanemazwi Bobble Rarama yeXbox koni.
Bust-A-Fambisa Deluxe yePSP.
Dambanemazwi Bobble 3D yeNintendo (3DS).
Dambanemazwi Bobble Online zvePC chete.
Dambanemazwi Bubble Disney (iOS).
Bubble Shooter, vakasununguka
Pakati peavo vese vakataurwa, pasina mubvunzo, rakabudirira kwazvo dombo reBust-A-Mota iri Bubble Shooter
Bubble Shooter ine kutarisa zvakapusa nechinangwa chakananga. Ino nguva mutambo hauna hanya zvakanyanya nekuisa echinyakare zvinhu zvemakateedzana akafuridzirwa, asi asi, pamwe nekuchengetedza iyo muropa Gameplay izvo zvakaita kuti zvifarirwe.
Mutambo unochengetedza hurongwa hwekukanda ma spheres kumusoro nemuseve, kuenzanisa iwo mavara, uye poindi mucherechedzo. Musiyano mukuru ndewekuti Bubble Shooter inopihwa mahara mumabhurawuza kana mashandisiro efoni, nepo ayo epakutanga achigadzirirwa mutambo wekunyaradza kana PC.
Mitemo yeBubble Shooter 😍
Wako mukuru chinangwa muBubble Shooter ndizvo bvisa mabhora ese ane mavara kubva pachiratidziro chekupfura mabhora ane mavara ane kani
Rangarira iwe unofanirwa fananidza angangoita matatu mabhora eeruvara rumwe kuitira kuti zvese izvi zviputike, uye nenzira iyoyo pedzisa skrini neese mabhora abviswa. Mavara e mabhora anobuda mudhiragi akasarudzika, saka hazvisi nyore sezvazvinonzwika.
Kuti uite izvi, unofanirwa kubata chidzitiro munzira yaunoda kupfura nekanoni, uchifunga nezvevara rebhora rakadzingwa kuti uwane rakaenzana.
Kuwedzera pakuve neyedu unyanzvi Paunenge uchisarudza pekuisa mabhora, zvakakoshawo kuve nazvo chinangwa chakanaka. Kufunga zvisizvo kana munzira isiriyo kunogona kutungamira kumhedzisiro inouraya.
Unofanira kungwarira nekuti kana mitsara yemabhora ane mavara akasvika kuCanyon, warasika mutambo uye unofanira kutanga pamusoro.
Kana uine mabhora mashoma asara kuti upedze mutambo, kana iwo mavara ebhora abuda mudhiramu haakubatsire iwe kubvisa mabhora, isu tinokuratidza izvi tsenga.
Isa mabhora ane mavara kuti iwe haufarire nezve imwe (kana imwe) yemuvara wakafanana wauinayo pachiratidziri, semuenzaniso pamabhora maviri maruva Aya mabhora ekutanga ichaita sehwaro yeinotevera, uye kana uchinge wawana iro vara raunoda kuputsa iyo nheyo, mabhora ese ari pairi achaperawo.
Nenzira iyi iwe unogona kupedzisa mutambo wacho nekukunda uye kudzivirira mabhora kuti asvike panjodzi achikonzera kuti urasikirwe.